Ebe Azịza |
Imirikiti ebe a na-arụ ọrụ axis ise na-agbaso usoro 3 + 2, ya bụ, XYZ usoro ahịrị atọ na-agbakwunye usoro abụọ nke ABC atọ na-atụgharị gburugburu XYZ. Site na akụkụ buru ibu, enwere kyzab, xyzac na xyzbc. Dika nchikota uzo nke uzo abuo abuo, o nwere ike buru div ...
Isi akụrụngwa ndị na-ebu ngwaahịa dị elu nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe na-etinye uche na Pearl River Delta na Yangtze River Delta mpaghara, nke ọnụ ọgụgụ ndị na-emepụta lathe CNC bukwara oke nnukwu. Ya mere, otú n'ụzọ ziri ezi họrọ CNC lathe nhazi manufactu ...
Kedu ọdịnihu nke NC machining specialty and how to choose?
Na China, ọpụrụiche CNC ịkpụzi akpụzi aghọọla ihe niile n'ime afọ iri gara aga, ndị na-emepụta ngwa ọrụ igwe CNC na-agbapụkwa ebe niile. Zọ mbata nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ NC na-agbada ala ma na-erughị ala, a na-ejikwa ngwa ngwa nkà na ụzụ nke NC machining specialty. ...
Njikwa machining ziri ezi nke CNC lathe na mmepụta
Njikwa nke ziri ezi nke CNC lathe na mmepụta Mmetụta nke CNC lathe machining ziri ezi na-abụkarị ihe kpatara ọtụtụ ihe, otu bụ ihe kpatara akụrụngwa, nke abụọ bụ nsogbu ngwaọrụ, nke atọ bụ mmemme, nke anọ bụ njehie benchmark, taa Wally igwe ...
Na CNC nkenke machining, olee otú iji melite mmepụta arụmọrụ site na CNC machining center mmemme bụ a chọrọ N'ezie maka machining nkọ. Ihe ndị na-emetụta arụmọrụ CNC na-arụ ọrụ gụnyere nsogbu ngwaọrụ, nsogbu nkwụsị, akụrụngwa igwe, wdg, na ihe ndị a ...
Processinglọ ọrụ nhazi CNC mgbe afọ 2019 gasịrị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche na ọ na-adalata iwu ahịa. Otu esi ejikwa ụlọ ọrụ nhazi CNC abụrụla isiokwu nke ọtụtụ ndị ọchụnta ego. Wally ígwè technology e-arụ ọrụ na CNC nhazi ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, na bụ als ...
Olee otú izere omume nke nkwekọrịta na-eme kwa ụbọchị mmepụta nke CNC machining site lathe
N'ime usoro nhazi ọrụ igwe kwa ụbọchị, CNC machining center processing bụ usoro a na-ahụkarị, yana usoro dabere dabere na nkenke nhazi. Mgbe anyị na-enwe ọ theụ dị elu nke akụrụngwa iji dozie nsogbu nhazi, otu esi egbochi ụlọ ọrụ CNC ịpị m ...
Etu esi choputa uzo nri kwesiri maka CNC lathe na nhazi ihe iji hu na ihe ahia di nma
Na usoro nke n'ibu akụkụ nhazi, CNC lathe bụ ihe kasị nkịtị CNC nhazi akụrụngwa. Kedu otu esi achọpụta nke ọma nke nhazi ngwaahịa? Tọ ntọala nkwụsịtụ nke CNC lathe bụ ụzọ ziri ezi iji hụ na ngwaahịa ziri ezi nke ngwaahịa. Mgbe ahụ Wally igwe ...
Olee inwale izi ezi nke CNC machining center kwuru mgbe ịzụta nkenke akụkụ
Mgbe ụlọ ọrụ na-azụta akụkụ ziri ezi, nkwupụta nke CNC machining center nke ndị na-eweta ya enweghị ike ịtụle nke ọma, nke na-eduga na nhọpụta nke ndị na-eweta ngwaahịa, na-ebute ọdịda ngwaahịa na mbubata oge. Olee otu anyi kwesiri isi nyochaa ihe edere nke CNC ...
Izi ezi nke machining center na-adịkarị ikpe site na nke akụkụ
Jikọrọ na n'ibu nhazi ụlọ ọrụ, CNC nhazi akụrụngwa dị mkpa, akpọkarị machining center, makwaara dị ka kọmputa gong. Ma a machining center nwere ike izute izi ezi chọrọ nke nhazi ngwaahịa, nke mbụ bụ na izi ezi nke machining center onwe ya bụ h ...
Isi nke CNC machining ziri ezi na machining
Na machining kwa ụbọchị, CNC machining ziri ezi anyị na-ezo aka na-agụnye akụkụ abụọ. Akụkụ nke mbụ bụ nha ezi nha nke nhazi, na akụkụ nke abụọ bụ izi ezi nke nhazi, nke bụkwa oke iwe anyị na-ekwukarị. Ka anyi kowaa nkenke banyere ...
Na ịkpụzi, ebe bụ uru nke teknụzụ igwe
Machining na-adịkarị kewara CNC nkenke machining, CNC lathe nhazi, zọ akpụ, na na. Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti anyị nkịtị metal stamping usoro na ndị ọzọ n'ibu nhazi, na ihe ndị bụ uru ya? Ihe dị iche n'agbata ígwè stamping usoro na CNC proc ...